VistraGluta Complex 800 plus Rice Extract | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်
အသားအရေပျက်ဆီးခြင်းမှအထူးကာကွယ်ပေးလို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Not bad ! Safe brand!
Vistra က အပြင်မှာလည်း ကောင်တာတွေ ဖွင့်ရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ တခြား အသားဖြူဆေးတွေထက် ပိုစိတ်ချရလို့ ၀ယ်သောက်ကြည့်နေပါတယ်။ မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ် အသားအရေပိုကြည်လာတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2015 အောကျတိုဘာ 13
သူငယ်ချင်းတော်တော်များများပြောလို့ ဒီဆေးသောက်ကြည့်တာ တော်တော်အကျိုးထူးပါတယ်။ အရင်ကဆို ကျွန်မအသားအရည်က မညီမညာနဲ့ မွဲခြောက်နေတဲ့အရောင်မျိုးဖြစ်နေတာ။ ဒါသောက်ပြီး တစ်လလောက်ကြာတော့ တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အရင်ကထက်အသားအရည်ပိုစိုပြေလာပြီး အသားပြန်ညီလာတယ်။ အရင်ကတော်ရုံဆေးတွေမသောက်ရဲဘူး။ side effect ရှိမှာစိုးလို့ရယ် ဘာမှမထူးမှာစိုးလို့ရယ်နဲ့။ အခုတော့ဒီဆေးသောက်တာတော်တော်ထူးခြားတယ်။ တခြားဘာဆိုးကျိုးလက္ခဏာမှလဲမရှိဘူး။ ခုလိုအွန်လိုင်းကနေလွယ်လွယ်ကူကူမှာလို့ရတော့ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ဆန်မှထုတ်လုပ်ထားသော ဗီတာမင်ဓာတ်နှင့် alpha -lipoic acid Antioxidant တို့ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရည် ရင့်ရော်ပျက်စီးခြင်းများကို အထူးကာကွယ်ပေးပါသည်။ အသားအရည် လျော့တွဲခြင်း ၊ ဘတ်တီးရီးယားနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ၀က်ခြံနှင့် အမာရွတ်များထင်ကျန်ခြင်း၊ အသားအရောင် မညီညာခြင်းနှင့် အသားအရည် ညစ်နွမ်းခြင်းတို့ကို ကောင်းမွန်စွာ ကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်သော အစွမ်း ရှိသောကြောင့် အမာရွတ်များ ကင်းစင်ကာ စိုပြေလှပသော အသားအရည် ပိုင်ဆိုင်လိုသူများ အထူးသောက်သုံးသင့်ပါသည်။ Gluta complex ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူများလည်း ဖြူစင်ဝင်းပသော အသားအရည်ကို အချိန်တိုအတွင်း ပိုင်ဆိုင် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထား၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ အသက်အရွယ်မရွေး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Gluta Complex 800 plus Rice Extract